कान्तिपुर मलमा सामान त किन्नु भएको थिएन ? चिट्ठाको नतिजा सार्वजनिक (भिडियो) – RealPati.com
कान्तिपुर मलमा सामान त किन्नु भएको थिएन ? चिट्ठाको नतिजा सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । राजधानीको गंगबुस्थित कान्तिपुर मलले दसैं, तिहार र छठ पर्वका अवसरमा सञ्चालन गरेको चिट्ठा शनिबार सार्वजनिक गरेको छ ।
मलमै आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सर्वसाधारणमार्फत पारदर्शी ढंगले चिट्ठा सार्वजनिक गरेको हो। मलमा रहेका पसलहरुले दसैं, तिहार र छठका अवसरमा एक हजारभन्दा माथिको सामना खरिद गर्ने ग्राहकलाई उपलव्ध गराएको कुपनको नम्बरका आधारमा शनिबार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।
शनिबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार सान्त्वनातर्फ १६५१२ नम्बरले पहिलो पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने ०५६५७, २४२४२, २४६७८, ०६६०९५ नम्बरले सान्त्वना पुरस्कार हात पारेका छन् ।
त्यसैगरी १५५०७ पाँचौं, १९०७९ चौथो, १५९४० तेस्रो १०२८५ दोस्रो र १४०२६ नम्बरले पहिलो पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। पहिलो पुरस्कार मोटरसाइकल र दोस्रो स्कुटर रहेको छ भने अन्य पुरस्कारमा विभिन्न सामग्री रहेको मलले जनाएको छ। शनिबार सार्वजनिक नम्बर भएको कुपनबाहकले पुरस्कार दावी गरेर लिन सक्ने मलले जनाएको छ।
मलप्रति ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विगत लामो समयदेखि चिट्ठालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मलका महाप्रबन्धक अमर निरौलाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर मलले संचालन गरेका यस्ता कार्यक्रममा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको निरौलाले जानकारी दिनुभयो। मल गंगबुजस्तो व्यस्त स्थानमा रहेको र यस्ता कार्यक्रमले ग्राहकहरुलाई मलसम्म आउन सघाउन पुराउने गरेको जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षित र सबै सामान एकै स्थानमा किन्न मलमा आउने ग्राहकलाई सुविधा पनि दिने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिएको निरौलाको भनाइ थियो ।
विभिन्न चाडपर्वमा चिट्ठालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ग्राहकहरु आकर्षित हुने गरेकाले विगत लामो समयदेखि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कान्तिपुर मल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रमेश गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा व्यवसायीहरुले पनि लाभ लिन सक्ने गौतमले बताउनुभयो।
पछिल्लो समय मलहरुमा ग्राहकहरुको आकर्षण बढ्दै गएको र यस्ता कार्यक्रमले ग्राहक र व्यवसायीलाई थप उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मलका व्यवसायी अर्जुन सेढाईले बताउनुभयो।
देशकै सबैभन्दा ठुलो बसपार्क रहेको गंगबुमा रहेको कान्तिपुर मल विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। मलमा लत्ताकपडासहित आवश्यक सम्पूर्ण सामान एउटै छतमुनि उपलव्ध रहेको मलले जनाएको छ । गुणस्तरीय सामान सर्वसुलम मूल्यमा सुरक्षित ढंगले खरिद गर्न मल उपयुक्त स्थान रहेको मलको भनाइ छ।